PDFElement, PDF ဖိုင်များပြောင်းလဲသွားပြီ ငါက Mac ကပါ
အသုံးချ | | Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ, အတော်ကြာ
PDF format ရှိသည့်ဖိုင်များကိုပြောင်းလဲရန်သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သောအသုံးပြုသူများစွာရှိပြီး ဖြစ်၍ ဤအရာသည်ယခင်ကထက်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည် PDFElement ပါ.
1 မည်သည့် PDF format ကိုမဆို format ပြောင်းပါ
မည်သည့် PDF format ကိုမဆို format ပြောင်းပါ
သူတို့က၏ယောက်ျားလေးများဖြစ်ရပြီ နေမင်း ဖိုင်များကိုဖန်တီးရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်၊ ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုသည့်စိတ်ကူးကောင်းသောအက်ပလီကေးရှင်းကိုတီထွင်ခဲ့သူများ PDF ဖိုင်ရယူရန် အသုံးပြုရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနှင့်အလိုလိုသိသော interface ကိုပါဝင်သည်တစ်ခုလျှောက်လွှာနှင့်အတူအခြားမည်သည့် format ကိုရန်။
PDF တွင်တိုက်ရိုက်တည်းဖြတ်ခြင်းရွေးစရာဖြေ။ PDF ဖိုင်ရယူရန် အခြား format နဲ့ပြောင်းစရာမလိုဘဲတိုက်ရိုက်။ လုံခြုံရေးနှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းရွေးစရာများခွင့်ပြုသရွေ့သင်လုပ်နိုင်သည်။
PDF ကိုအခြားပုံစံများသို့တင်ပို့ပါဖြေ - ဒီရွေးစရာနဲ့လုပ်နိုင်တယ် တင်ပို့သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲ မည်သည့် format လုပ်ထားတဲ့ဖိုင် PDF ဖိုင်ရယူရန် သင်အလိုချင်ဆုံးပုံစံတွင် Word, Excel စာရင်းဇယားများ၊ Power Point တင်ပြချက်များစသဖြင့်အထင်ရှားဆုံးဖြစ်သည်။
အမိန့် PDF ကိုဖန်တီးပါ အခြားပုံစံများသို့တင်ပို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာကိုရှာဖွေရုံသာမကကျွန်ုပ်တို့လည်းလုပ်နိုင်သည် PDF ဖိုင်များကိုဖန်တီးပါ ဒီ option ကိုအတူ
ဖိုင်တွဲများ ဖိုင်များစွာနှင့်ဖိုင်တစ်ခုတည်းကိုဖန်တီးရန်အလွန်အသုံးဝင်သည် PDF ဖိုင်ရယူရန် သူတို့ကိုအတူတကွအုပ်စုဖွဲ့။
ကျွန်ုပ်သည်ဤပုံစံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အစီအစဉ်များနှင့်ဖိုင်များအမြောက်အများကိုလက်ရှိကိုင်တွယ်နေသဖြင့်ကျွန်ုပ်စိတ်ကြိုက်ပုံစံဖြင့်ဖိုင်များကိုကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်ပုံစံဖြင့်ရယူနိုင်ပါသည် (သို့) ဖိုင် (၅) ခုထဲမှဖိုင် (၅) ခုတွင်အစီအစဉ်များ (သို့) စာရွက်စာတမ်းများထားရှိခြင်းမှရနိုင်သည်။
ဤ application သည်ကျွန်ုပ်၏ MacBook ၏ hard drive နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသောကြောင့်ဖိုင်များနှင့် ပြောင်းလဲ၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်ဇိမ်ခံကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ PDF ဖိုင်ရယူရန် ဒီလိုမျိုး။
ကနေယောက်ျားတွေမှကျေးဇူးတင်ပါတယ် နေမင်း ဒီစိတ်ကူးအလုပ်အကိုင်အဘို့။
ဒါကအခမဲ့မဟုတ်ပေမယ့်ဒီစိတ်ကူးအလုပ်အတွက်စျေးကိုပေးဆပ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ သို့သော်သင်မြန်လျှင်သင် iOS ဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်သင်ငွေပေးစရာမလိုပါ ကန့်သတ်အချိန်အခမဲ့.
သင် download လုပ်နိုင်ပါတယ် လြှောကျလှာ တိုက်ရိုက် developer များ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေ PDFElement ပါ,
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ပရိုဂရမ်များ » Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ » PDFElement, PDF ဖိုင်များပြောင်းလဲသွားပြီ
Apple အတွက် ၀ ယ်လိုအားနှင့် Wi-Fi ချိတ်ဆက်မှုလက်ထောက်အတွက်ဤအချိန်